Otu n'ime ndị ahịa anyị na-arụ ọrụ na ụlọ na-akwado ụlọ ọrụ Ihe ngwọta intranet enwere ike idozi ya n'ime ụlọ ọrụ. Intranets na-enye aka maka ụlọ ọrụ iji kpọsaa akụkọ ụlọ ọrụ, kesaa ozi ahịa, nye ozi uru, wdg.
Anyị nyeere OnSemble aka ịwepụ ihe ngwọta Intranet ha na webụsaịtị nke ụlọ nne na nna ha. Ọ bụ nnukwu ọrụ nke jikọtara ihe niile site na ịmepụta profaịlụ mmekọrịta ọhụụ, imelite Marketo, wee wezuga ụfọdụ ọdịbendị omenala ha mere n'oge gara aga iji jikọta saịtị ha.
May nwere ike ọ gaghị amata nke a, mana ịnwere ike ijide screenshots zuru oke site na iji ngwa Google nke ngwa mmepe siri ike. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụghị ihe a maara nke ọma n'agbanyeghị na ọ nwere mgbanwe dị ịtụnanya.
Ngwaọrụ Mmepụta Google Chrome nwere nhọrọ iji hụchalụ saịtị n'iji ogwe ngwaọrụ ngwaọrụ ya. The ngwá ọrụ e wuru ka mmepe nwere ike ịhụ otú saịtị anya dị iche iche viewport nha gafee iche iche ngwaọrụ… ma ọ na-eme na-abụ a n'ụzọ zuru okè iji nweta a n'ụzọ zuru oke sized nseta ihuenyo nke ibe weebụ.
N'okwu a, anyị chọrọ ka onye ọ bụla na-azụ ahịa OnSemble gafee ọrụ ndị wuru saịtị Intranet mara mma iji nweta nseta ihuenyo ka anyị wee nwee ike igosipụta ha niile n'ime pọtụfoliyo na weebụsaịtị ha. Anyị chọrọ ka peeji ndị ga-abụ 1200px buru ibu site na 800px ogologo. Iji mezuo nke a:
Y’oburu na ibu onye isi uzo eji eme mkpirisi keyboard, inwere ike ichota otutu uzo ihu uzo a. Approachzọ a anaghị m amasị ka enweghị m ike ịtọ oke elu nke viewport… mana ọ na-abara gị uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ nseta ihuenyo niile.